အသုံးဝင်သော link များစာရင်း
ဘယ်လို ၀ င်ရမလဲ
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန )
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ ( လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရို)
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနေအိမ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနများ ( လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရို)
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဥပဒေ ( လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုမှုအက်ဥပဒေ)
နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားအသစ်များကိုလက်ခံခဲ့သည် (နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက် "အထူးကျွမ်းကျင်မှု" စသည်တို့) [လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာနေထိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ] ( နိုင်ငံခြားသားအရင်းအမြစ်အသစ်များလက်ခံမှု ( နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း "အထူးကျွမ်းကျင်မှုများ" ဖန်တီးခြင်းစသည်) [လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရို ])
နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန [၀ န်ကြီးချုပ်၏နေအိမ်]
ဗီဇာ / ဂျပန်တွင်နေထိုင်ခြင်း [နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အစီအမံ [ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
နိုင်ငံခြားသားများကိုအလုပ်ခန့်ရန်အကြောင်း [Metropolitan Police Department]
သူနာပြု [ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
အဆောက်အ ဦး သန့်ရှင်းရေး [ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း (ရုပ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်း / စက်မှုစက်ယန္တရားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း / လျှပ်စစ် / အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ) [စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန])
ဆောက်လုပ်ရေး [မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန] (ဆောက်လုပ်ရေး [မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန])
သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးနှင့်အဏ္ဏဝါစက်မှုလုပ်ငန်း [မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
လေကြောင်းလိုင်း [မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း [မြေယာ၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန]
တည်းခိုခြင်း [ခရီးသွားလုပ်ငန်း] (တည်းခိုခြင်း [ခရီးသွားအေဂျင်စီ])
စိုက်ပျိုးရေး [စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန]
အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း [စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန]
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း [စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန] (စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း [စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန])
ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ [ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း / ဂျပန်ပညာရေးဖလှယ်ရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအသင်း] ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း
ဂျပန်အခြေခံစာမေးပွဲ [ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း] ဂျပန်အခြေခံစာမေးပွဲ
သူနာပြု [ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန] သူနာပြု
အဆောက်အ ဦး သန့်ရှင်းရေး [Japan Building Maintenance Association] အဆောက်အ ဦး သန့်ရှင်းရေး
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ စက်မှုစက်ယန္တရားစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း / လျှပ်စစ် / အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း) [စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန] ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
ဆောက်လုပ်ရေး [ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းရည်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်း] ဆောက်လုပ်ရေး
သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး / အဏ္ဏဝါစက်မှုလုပ်ငန်း [Nippon Kaiji Kyokai] သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး / ရေကြောင်းလုပ်ငန်း
လေကြောင်း [ဂျပန်လေကြောင်းနည်းပညာအသင်း] လေကြောင်း
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း [Japan Automobile Maintenance Promotion Association] ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
တည်းခိုခြင်း [နေထိုင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲစင်တာ] Lodgeging
စိုက်ပျိုးရေး [အမျိုးသားစိုက်ပျိုးရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း] စိုက်ပျိုးရေး
ငါးလုပ်ငန်း [Dainippon ငါးလုပ်ငန်းအသင်း] ငါးလုပ်ငန်း
အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း [နိုင်ငံခြားစားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်အဖွဲ့] စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း
နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းနည်းစနစ်ကို အခြေခံ၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းနည်းစနစ်အသစ်အကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနအကြောင်း
နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းစနစ် (ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန) အကြောင်းနိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းစနစ်အကြောင်း
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း (OTIT) နိုင်ငံခြားနည်းပညာသင်တန်းအဖွဲ့
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (JITCO) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း (နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်)
မွန်ဂိုလီးယား MONGOL နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချွန်လွှာ
လက်ကမ်းစာစောင် "နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းဥပဒေကိုပြhas ္ဌာန်း ခဲ့သည်!" (နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ တွင်ထုတ်ဝေသည်) [PDF format: 880KB] လက်ကမ်းစာစောင် "နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်သင် သင်တန်းဥပဒေကိုပြhas္ဌာန်းခဲ့သည်!" (နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ တွင်ထုတ်ဝေသည်) [PDF format: 880KB]
နိုင်ငံခြားသားများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းနည်းစနစ်အကြောင်း (ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပြန်လည်စိစစ်ခဲ့သည်) [PDF format: 3.81MB] နိုင်ငံခြားသားများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းစနစ် (ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင်ပြန်လည်စိစစ်)၊ ၃ နှစ် Reiwa၊ Reiwa၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းဥပဒေနှင့်အရည်အချင်းရှိသော ၀ န်ကြီးဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) [PDF format: 3.81MB]
နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းနည်းစနစ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သောအလုပ်များနှင့်အလုပ်စာရင်း (အလုပ်အကိုင် ၈၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလအထိအလုပ်ရှိသည်) [PDF format: 540KB] နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းနည်းစနစ်အလုပ်အကိုင်စာရင်းနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအလုပ်စာရင်း (အလုပ်အကိုင် ၈၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလအထိအလုပ် ၁ ခု ၈) သုံးနှစ် Reiwa) [PDF format: 540KB]
・ ခွင့်ပြုမိန့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (အထွေထွေ) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )
ခွင့်ပြုချက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (အထွေထွေ) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )
・ ခွင့်ပြုချက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (သတ်သတ်မှတ်မှတ်) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )
ခွင့်ပြုချက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (သတ်သတ်မှတ်မှတ်) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )
အများပြည်သူပင်စင်စနစ် (နည်းပညာတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆုတ်ခွာငွေအပါအ ၀ င်) နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအားပြည်သူ့ပင်စင်စနစ်တွင် (တစ်ကြိမ်တည်းငွေထုတ်ယူခြင်းအပါအ ၀ င်) စာရင်းသွင်းခြင်းအကြောင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်အလုပ်အကိုင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအထောက်အပံ့စသည်တို့သည်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွင်ဆက်လက်တက်ရောက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအထောက်အပံ့များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသစ် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန)
coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်နှင့်အတူကူးစက်ခံရသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏နေထိုင်ခွင့်အတွက်လျှောက်လွှာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန) Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်နှင့်ကူးစက်ခံရသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏နေအိမ်သို့လျှောက်လွှာများ (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန)
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောလူတိုင်းအတွက် - နေထိုင်မှုလျှောက်လွှာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ - နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားသင်တန်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်လျှောက်လွှာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ။
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ တွင်“ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုမှုအက်ဥပဒေနှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနထူထောင်ရေးအက်ဥပဒေကိုတစိတ်တပိုင်းပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ” ကို (၁၉၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး (အထူးအစည်းအဝေး) တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးထိုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ပင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း 30 ဥပဒေအမှတ် 102) ။ ဤပြင်ဆင်ချက်တွင် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၁" နှင့် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၂" နှင့်ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတည်ထောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ တွင်“ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုမှုအက်ဥပဒေနှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနထူထောင်ရေးအက်ဥပဒေကိုတစိတ်တပိုင်းပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ” ကို (၁၉၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး (အထူးအစည်းအဝေး) တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးထိုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ပင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ဥပဒေအမှတ် ၁၀၂) ဤပြင်ဆင်ချက်တွင် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၁" နှင့် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၂" နှင့်ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတည်ထောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
the ပြည်တွင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများအတွက် (စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက်အရည်အချင်းများကိုfromပြီလမှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်) ပြည်တွင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများအတွက် (စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အရည်အချင်းများကိုAprilပြီလမှတိုးချဲ့ခဲ့သည်) ၁၊ ရွေ)
on coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်များပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း။ coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ကိုင်တွယ်
Japan နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့်အတူဂျပန်တွင်အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားများ“ အထူးကျွမ်းကျင်မှုများ”
・"နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်း" အထူးကျွမ်းကျင်မှု "ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ (PDF) "နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း" အထူးကျွမ်းကျင်မှု "ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ (PDF)
System Explanatory Material "နိုင်ငံခြားသားအသစ်များကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အစပျိုးခြင်း"
foreign နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အသစ်ကိုလက်ခံရန်နှင့်သင်္ကေတဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုများ [PDF]
Foreign နိုင်ငံခြားသားအသစ်များကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစပျိုးခြင်း (အင်္ဂလိပ်) [PDF] အခြားဘာသာစကား (၁၁) ခု (ဇွန်လ ၂၀၁၉)
တရုတ် (တရုတ်) [PDF]
နီပေါ (နီပေါ) [PDF]
မွန်ဂို (မွန်ဂို) [PDF]
ဗမာ (မြန်မာ) [PDF]
ထိုင်း (ထိုင်း) [PDF]
ဘင်ဂါလီ (ဘင်္ဂလီ) [PDF]
ဆင်ဟာလီ (ဆင်ဟာလ) [PDF]
ဗီယက်နမ် (ဗီယက်နမ်) [PDF]
ကမ္ဘောဒီးယား (ကမ္ဘောဒီးယား) [PDF]
အင်ဒိုနီးရှား (အင်ဒိုနီးရှား) [PDF]
・ လက်ကမ်းစာစောင် (နိုင်ငံခြားသားများအတွက်)
・ လက်ကမ်းစာစောင် (လက်ခံသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်)
・ လက်ကမ်းစာစောင် (မှတ်ပုံတင်ထားသောအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်) [
12 ဘာသာစကား (12 ဘာသာစကား) (2020.4) PDF ကို
MO“ နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများ” လူထုဆက်ဆံရေးဗီဒီယိုအတွက် YouTube MOJ ရုပ်သံလိုင်း၏“ နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်တည်မှုရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အစီအစဉ်များ” ဗီဒီယို (YouTube တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန)
"နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများ" ၏လူထုဆက်ဆံရေးဗီဒီယိုကို YouTube ၏တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှလွှင့်တင်ခဲ့သည်။
(ဗီဒီယို "နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း" ဗီဒီယိုကို YouTube MOJ ရုပ်သံလိုင်းတွင်တင်ထားသည်။ )
ယခုဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေထိုင်ရာအဆင့်အတန်း "အထူးကျွမ်းကျင်မှု" ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြပြီးနိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရန်ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရို၏အားထုတ်မှုအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
・ "ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှဂျပန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း"၊ ဂျပန်အစိုးရ၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောနိုင်ငံရပ်ခြားရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဂ္ဂဇင်း
ဂျပန်အစိုးရ၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှထုတ်ဝေသောပြည်ပရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဂ္ဂဇင်း၏“ Highlighting Japan” မဂ္ဂဇင်း၏ ၂၀၂၀ မတ်လထုတ်ပြသမှုတွင်နေထိုင်သူအဆင့်အတန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အားထုတ်မှုများကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
(ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှမတ်လ ၂၀၂၀ တွင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အရေးကိစ္စတွင်“ သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား” နှင့်“ သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အစပြုမှုများ” ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေအသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။ )
[E-book ဗားရှင်း (E-book)] P22-23
[HTML ဗားရှင်းအင်္ဂလိပ် (အင်္ဂလိပ်)]
[HTML ဗားရှင်းဂျပန် (ဂျပန်)]
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၏လက်ခံမှု (ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန) နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအားလက်ခံခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ်ကမ္ဘာ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစည်းမျဉ်းများသိရန်သတင်းအချက်အလက် link ကို
ATA IATA Travel စင်တာ
V COVID-19 ခရီးသွားစည်းမျဉ်းမြေပုံ
・ WHO ကမ္ဘာ့ကူးစက်မှုအခြေအနေ
ပြည်ပရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားသားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပင်မစာမျက်နှာ
ပြည်ပရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနသည်ပြည်ပတွင်လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက်ပင်မစာမျက်နှာ
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသတစ်ခုချင်းစီရှိဂျပန်နှင့်ဂျပန်မှခရီးသွားများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကန့်သတ်ချက်များနှင့် ၀ င်ရောက်ပြီးသည့်နောက်အရေးယူမှုများကိုကန့်သတ်သည်
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန - ဂျပန်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှခရီးသွားများနှင့်ဂျပန်လူမျိုးများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်အပြုအမူကန့်သတ်ချက်များ
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်အတွက်နယ်စပ်ရေးရာများပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ဆောင်ရွက်ချက်များအကြောင်း
* နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် coronavirus ကူးစက်ရောဂါအသစ်များအတွက်နယ်စပ်ရေးရာများပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ဆောင်ရွက်သည်
ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဂျပန်သို့ ၀ င်ရောက်လာသောအခါ၊
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်လာသောအခါ၊
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှဂျပန်သို့ဆင်းသက်ရန်ငြင်းဆန်သောနေရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်
* တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဆင်းသက်ရန်ငြင်းဆန်သည့်နေရာများအကြောင်းပြန်ကြားရေး။
Japan-Taiwan Exchange Association COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်
* Japan Taiwan Exchange Association COVID-19 နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များ
Honolulu (ဟာဝိုင်ယီ) ရှိဂျပန်၏ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်
Hagagna (ဂူအမ်) ရှိဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်
Hagagna (မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ) ရှိဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်
ဤစနစ်ကို AWS သို့လွှဲအပ်သည်။ AWS အတွက် FileMaker Cloud (Amazon Web Services)